Joshụa 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Joshụa gwara ndị agha ya ka ha zoo iji lụso ndị E-aị agha (1-13)
Ndị Izrel mechara weghara E-aị (14-29)
A gụpụtara Iwu Mosis n’Ugwu Ibal (30-35)
8 Jehova wee sị Joshụa: “Atụla egwu, atụkwala ụjọ.+ Kpọrọ ndị agha niile gawa E-aị. Enyefeela m eze E-aị, ndị ya, obodo ya, na ala ya n’aka gị.+ 2 Meekwa E-aị na eze ya ihe i mere Jeriko na eze ya.+ Naanị ihe ga-adị iche bụ na unu ga-ebukọrọ ihe unu ga-akwata n’ime ya, kpụrụkwa anụ ụlọ ndị dị ebe ahụ. Gwa ndị agha gị ụfọdụ ka ha zoo n’azụ obodo ahụ.” 3 Joshụa na ndị agha niile wee bilie gawa E-aị. Ọ họọrọ puku ndị agha iri atọ (30,000) siri ezigbo ike ma zipụ ha n’abalị. 4 Ọ gwakwara ha, sị: “Gaanụ zoo n’azụ obodo ahụ. Unu ezokwala n’ebe dị ezigbo anya n’obodo ahụ. Jikerekwanụ, unu niile. 5 Mụ na ndị niile mụ na ha so ga-aga obodo ahụ nso. Ọ bụrụkwa na ha apụta ka ha lụso anyị agha otú ha mere na mbụ,+ anyị ga-agbara ha ọsọ. 6 Ha chụwa anyị, anyị ga-arapụta ha n’obodo ha, n’ihi na ha ga-asị, ‘Ha na-agbara anyị ọsọ otú ha mere na mbụ.’+ Anyị ga-agbakwara ha ọsọ. 7 Unu ga-esizi n’ebe unu zoro pụta, wegharakwa obodo ahụ. Jehova bụ́ Chineke unu ga-enyefekwa ya n’aka unu. 8 Ozugbo unu weghaara obodo ahụ, sunyenụ ya ọkụ.+ Meenụ ihe Jehova kwuru. Ihe a m kwuru ka unu ga-eme.” 9 Joshụa wee zipụ ha, ha agaa ebe ha ga-ezo. Ha zoro n’agbata Betel na E-aị, n’ebe ọdịda anyanwụ E-aị. Ma, Joshụa so ndị agha ya fọrọnụ hie ụra n’abalị ahụ. 10 Mgbe Joshụa biliri n’isi ụtụtụ, ọ kpọkọtara ndị agha ya, ya na ndị okenye Izrel eduru ha gawa E-aị. 11 Ndị agha niile+ ya na ha so gawakwara ma ruo obodo ahụ nso, maa ụlọikwuu n’ebe ugwu E-aị. E nwekwara ndagwurugwu n’agbata ha na E-aị. 12 Joshụa kpọkwaara ihe dị ka puku ndị agha ise (5,000), ha agaa zoo+ n’agbata Betel+ na E-aị, n’ebe ọdịda anyanwụ E-aị. 13 A hazikwara ndị agha ahụ, ọtụtụ n’ime ha anọrọ n’ebe ugwu obodo ahụ,+ ndị nke fọrọnụ agaa zoo n’ebe ọdịda anyanwụ obodo ahụ.+ Ma, Joshụa gara nọrọ n’etiti ndagwurugwu ahụ n’abalị ahụ. 14 Ma, ozugbo eze E-aị hụrụ ihe a, ya na ụmụ nwoke obodo ya niile mere ngwa ngwa bilie n’isi ụtụtụ ka ha gaa lụso ndị Izrel agha, n’akụkụ ọzara dị ebe ahụ.* Ma ọ maghị na e nwere ndị agha Izrel zoro n’azụ obodo ha. 15 Mgbe ndị E-aị pụtara ịlụso Joshụa na ndị Izrel niile agha, ha gbaara ọsọ tinye isi n’ụzọ gara ala ịkpa.+ 16 A gwaziri ndị obodo ahụ niile ka ha pụta chụwa ha. Ka ha nọkwa na-achụ Joshụa, a rapụtara ha n’obodo ha. 17 O nweghịzi nwoke ọ bụla fọdụrụ ma n’obodo ahụ ma na Betel. Ha niile chụụrụ ndị Izrel gawa. Ha ghewekwara ọnụ ụzọ ámá obodo ha oghe chụrụ ndị Izrel gawa. 18 Jehova gwaziri Joshụa, sị: “Setịa árọ̀ ahụ i ji n’aka ka o chee E-aị ihu,+ n’ihi na m ga-enyefe ya n’aka gị.”+ Joshụa wee setịa árọ̀ ahụ o ji n’aka chee ya ihu n’ebe obodo ahụ dị. 19 Ozugbo o setịrị aka ya, ndị agha ahụ zoro ezo si ebe ha nọ pụta ngwa ngwa, gbara ọsọ banye n’obodo ahụ ma weghara ya. Ha sunyekwara obodo ahụ ọkụ ozugbo.+ 20 Mgbe ndị E-aị lere anya n’azụ, ha hụrụ anwụrụ ọkụ si n’obodo ha na-akwụli elu, ike agwụ ha. Ha enweghịkwa ike ịgbaga ebe ọ bụla. Ndị agha Izrel, ndị nke gbaara gawa ala ịkpa, tụgharịrị chụwazie ndị ahụ na-achụ ha. 21 Mgbe Joshụa na ndị Izrel niile hụrụ na ndị agha ha zoro ezo ewegharala obodo ahụ, nakwa na anwụrụ ọkụ obodo ahụ na-akwụli elu, ha tụgharịrị gbuwe ndị E-aị. 22 Ndị agha Izrel ndị nke nọ n’obodo ahụ pụtakwara lụsowe ndị E-aị agha, ha anọrọzie ndị Izrel n’etiti. Ụfọdụ ndị Izrel nọ n’ihu ha, ndị nke ọzọ anọrọ n’azụ ha. Ndị Izrel gbugidere ha ruo mgbe a na-enweghịzi onye n’ime ha fọdụrụ. E nweghịkwa onye n’ime ha gbapụrụnụ.+ 23 Ma, ha jidere eze E-aị+ ná ndụ kpụtara ya Joshụa. 24 Ndị Izrel ji mma agha gbuo ndị E-aị niile chụụrụ ha ruo ala ịkpa. Mgbe ha gbuchara onye ọ bụla n’ime ha, ndị Izrel niile laghachiri E-aị ma jiri mma agha sụọ ndị fọrọ n’obodo ahụ akwụ. 25 Ndị niile nwụrụ n’ụbọchị ahụ, ma nwoke ma nwaanyị, dị puku iri na abụọ (12,000). E gburu ndị E-aị niile. 26 Joshụa ewedaghịkwa aka ahụ o ji setịa árọ̀ ahụ+ ruo mgbe o gbuchara ndị niile bi n’obodo ahụ.+ 27 Ma, ndị Izrel kpụụrụ anụ ụlọ ndị obodo ahụ, bukọrọkwa ihe ha kwatara n’obodo ahụ, otú ahụ Jehova gwara Joshụa ka e mee.+ 28 Joshụa gbaziri E-aị ọkụ, ya abụrụ ebe e bibiri ebibi.+ Ọ dịkwa otú ahụ ruo taa. 29 Joshụa kwụwakwara eze ndị E-aị n’elu osisi ruo mgbede. Mgbe anyanwụ na-achọkwa ịda, o kwuru ka e butuo ozu ya n’elu osisi ahụ.+ Ha wee butuo ya ma busa ya n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, tụkwasị ọtụtụ nkume n’elu ya. Ikpo nkume ndị ahụ dịkwa ebe ahụ ruo taa. 30 Ọ bụ mgbe ahụ ka Joshụa rụụrụ Jehova bụ́ Chineke Izrel ebe ịchụàjà n’Ugwu Ịbal.+ 31 Ihe a o mere bụ ihe Mosis bụ́ ohu Jehova gwara ndị Izrel ka ha mee. E dere n’akwụkwọ Iwu+ Mosis, sị: “Rụọ ebe ịchụàjà e ji nkume a na-awaghị awa rụọ, nke ihe ọ bụla e ji ígwè mee na-emetụbeghịkwa.”+ Ha chụụrụ Jehova àjà a na-esu ọkụ na àjà udo n’elu ya.+ 32 O dekwara Iwu+ Mosis n’elu nkume ahụ. Ọ bụ Iwu ahụ Mosis dere n’ihu ndị Izrel.+ 33 Ndị Izrel niile, ndị okenye ha, ndị isi ha, na ndị ikpe ha guzo n’akụkụ abụọ nke Igbe ahụ, n’ihu ndị nchụàjà, bụ́ ndị Livaị, ndị bu igbe ọgbụgba ndụ Jehova. Ndị mbịarambịa na ụmụ amaala nọkwa ebe ahụ.+ Ọkara ha guzo n’ihu Ugwu Gerizim, ọkara nke ọzọ eguzoro n’ihu Ugwu Ịbal+ (otú ahụ Mosis ohu Jehova kwuru ka e mee),+ ka a gọzie ndị Izrel. 34 Mgbe e mechara, Joshụa gụpụtara ihe niile e dere n’Iwu Mosis,+ ma ngọzi+ ma ọbụbụ ọnụ.+ Ọ gụrụ ihe niile e dere n’Iwu ahụ. 35 O nweghị okwu ọ bụla dị n’Iwu Mosis nke Joshụa na-agụpụtaraghị ndị Izrel niile gbakọtaranụ.+ Ụmụ nwaanyị, ụmụaka, na ndị mbịarambịa+ ha na ha bi so ná ndị ahụ gbakọtaranụ.+
^ Ma ọ bụ “n’akụkụ Araba.”